बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ रुपमा विषयमा उठेका प्रश्नबारे देशका वैज्ञानिक र विशेषज्ञहरुले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेनलाई लिएर बयान दिएपछि यो सवाल–जवाफको शृंखला सुरु भएको हो । जोनसोनले भाइरसको नयाँ रुप पहिलेभन्दा अधिक घातक...
आफ्नो जीवनकालमा ओशोलाई विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु र आध्यात्मिक शिक्षकका रुपमा हेरियो । उनले मानव जीवनको कामुताबारे खुलेर आफ्नो राय व्यक्त गरेकै कारण उनलाई ‘सेक्स गुरु’को संज्ञा पनि दिइयो । ओशोले ‘संभोगदेखि समाधीतर्फ’ को विचार व्यक्त गरे । अश्लिलता, कामुकता तथा...
सिटी एक्स्प्रेसलाई गाभेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थाल्यो एकीकृत कारोबार
सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्सलाई गाभेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आजदेखि एकीकृत कारोबार थालेको छ। इन्भेष्टमेन्टका तीन शाखाहरु घन्टाघर, बिर्तामोड र गाईघाटबाट एकीकृत कारोबार आरम्भ भएको हो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका देशभर ८६ शाखा, १२८ एटीएम, २० एक्सटेन्सन काउन्टरहरू, १० राजस्व संकलन काउन्टरहरू र...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ताको तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्च अदालत र कानुन व्यवसायीमाथि निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्दै टिप्पणी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् उनले प्रतिनिधिसभा...
काठमाडौं । नागरिक अगुवा, प्रखुर वक्ता एवं बौद्धिक व्यक्तित्व देवेन्द्रराज पाण्डेको आत्ममन्थन ‘एक ज्यान दुई जुनी’ लोकार्पण भएको छ । फाइनप्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको कृति आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको हो । पाण्डे इमानदार, निष्ठावान् र पारदर्शी चरित्रको व्यक्ति रहेको...
मनाङ – यतिबेला हिमाली जिल्लाका खेतबारी र डाँडापाखा सेताम्मे हिउँले ढाकिन्थे । यस वर्ष हिउँ नपर्दा डाँडापाखा उराठलाग्दा र खेतबारी मरुभूमि जस्ता भएका छन् । हिउँले ढाकिएका जमिनमा रसिलो माटो अनि खेतबारीमा मल भिज्नाले बाली फस्टाउने यहाँका किसान बताउँछन् । ...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएसनका चार पूर्वअध्यक्षले ओलीको भर्त्सना गरेका छन्। पूर्वअध्यक्षहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी प्रधानमन्त्री ओलीको यस भनाइप्रति...
काठमाडाैं : सरकार सदैव जनताको साथमा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वास दिलाएका छन्। 'सरकारका केही महत्वपूर्ण काम हुन्छ। भूमिको रक्षा गर्नु सरकारको काम हो। देशको स्वाधीनता रक्षा गर्नु सरकारको काम हुन्छ, तर सरकारको काम सबै जनतासँग सबैको पहिचान गरी समाधान...
काठमाडौं । सुमेरु ग्रुपको सहयोगमा नेपाल तेक्वान्दो संघ बागमती प्रदेशले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड– २०७६ अन्तर्गत वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड विजेता नवीनकुमार श्रेष्ठ र स्पेसल अवार्ड विजेता आयशा शाक्यलाई सम्मान गरेको छ । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ तामाङको...
११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यद्यपि दर्ता हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई ‘बाजे’ भन्ने निन्दायुक्त शब्द प्रयोग...
गायिका सुनिता दुलालको बिवाहको खबर एक कान, दुई कान, मैदान भयो । गएको भदौंमा उनले बिवाह गर्ने चर्चासँगै कोसँग र कहाँ बिवाह गर्ने भन्ने कुरा समेत फैलिएको थियो । त्यो खबर फैलिएसँगै सुनितालाई थुप्रै शुभचिन्तकले बधाई समेत दिए । धेरैले...
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेश सभामा समेत परेको छ । नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको संकटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो । नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने...
लमजुङ : मध्यनेपाल नगरपालिकाका बाढी पहिरो पीडितलाई अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले सहयोग गरेका छन्। गत बर्खामा आएको बाढी र पहिरोबाट बिस्थापित मध्यनेपाल नगरपालिकाको लामासोती पुरानोडिही क्षेत्रका नागरिकलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। मध्यनेपाल घर भई अमेरिका बस्दै आएका प्रमोद घिमिरेको...
भिरबाट लडेर खोटाङको साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छा मबुका वडा सदस्य रत्नप्रसाद फुयाँलको मृत्यु भएको छ। रतन्छाबाट आफ्नो घर मबु जाने क्रममा स्थानीय वाकुर्तुम जंगलमा रहेको ठूलो भिरबाट लडेका वडासदस्य फुयाँलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। करीब ३०० मिटर तल खसेका वडासदस्य फुयाँलको...
बलिउड अभिनेता वरुण धवन र उनकी प्रेमिका नताशा दलालको आइतबार विवाह हुँदैछ। हिन्दु संस्कृति अनुसार, वरुण र नताशाको विवाह अलिबागस्थित ‘द म्यान्सन हाउस रिसोर्ट’ मा हुँदैछ। भारतीय अखबर प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया, पिटिआइका अनुसार विवाहमा दुवै पक्षका परिवार र नजिकका साथीहरू उपस्थित भइसकेका छन्। कोरोना...
पिरका भारी बोकेर गाउँ पस्दैन सहर साट्न खुसी हो, अचेल गाउँ आकाश र जमिन नभेटिने क्षितिज जस्तो साँघुरो खोँचबाट हरदम चिहाइरहने मधुरो घाम जस्तो एक अनिश्चित भूमरीमा फनफनिदै खै! कसको आशमा बाँचिरहेको छ? यता, एक गाउँले भने गाउँ बिर्सेपछि किसान...
११ माघ, काठमाडौँ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यस अघिको कारोबार बिहीबार पनि नेप्से परिसूचक बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । साताको पहिला कारोबार दिन ५०.२० प्रतिशतले बढेर नेप्सले ऐतिहासिक २४२४.८४ अंकको किर्तिमानी...
हुम्लाका २ गाउँपालिकाका ६० विद्यालयमा माघ १५ गतेदेखि पठनपाठन शुरू हुने भएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रास कम भएको भन्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर गाउँपालिका शिक्षा समितिबाट निर्णय गरेर विद्यालयमा पठनपाठन हुने भएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेको सर्केगार्ड...
– कृष्ण न्यौपाने तनहुँ । यस वर्षकोे बाढीपहिरोका कारण तनहुँमा १४ जनाले ज्यान गुमाए । गत असार र साउनमा परेको वर्षापछि आएको बाढीपहिराका कारण ऋषिङ गाउँपालिकामा पाँच, व्यास नगरपालिकामा छ, भानु नगरपालिकामा दुई र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक जनाले ज्यान गुमाए...
११ माघ, काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । काठमाडौंस्थित एक पार्टी प्यालेसमा मुख्यमन्त्री राईले जाङ्मु शेर्पासँग बिहे गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईको वैवाहिक समारोहमा पार्टीका सीमित नेता र आफन्तहरु सहभागिता रहेको थियो ।...
खोटाङको साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छा मबुका वडा सदस्य रत्नप्रसाद फुयाँलको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको छ । रतन्छाबाट आफ्नो घर मबु जाने क्रममा स्थानीय वाकुर्तुम जंगलमा रहेको ठूलो भीरबाट लडेका वडा सदस्य फुयाँलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । करीब ३०० मिटर तल...
शिरमा मयुरको प्वाँख भिरेर बेहुला बन्दा यस्तो देखिए मुख्यमन्त्री शेरधन [तस्वीर]
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र पूर्व मिस मंगोल जाङ्मु शेर्पा विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । आइतवार एक समारोहका बीच शेरधन र जाङ्मुबीच विवाह भएको हो । मुख्यमन्त्री राईका प्रेस संयोजक ध्रुव सुवेदीले फेसबूकमा तस्वीर राखेर मुख्यमन्त्री राईलाई बधाई दिएका छन् । 'माननीय...
२४ सय नाघ्यो सेयर बजार, कारोबारमा नयाँ रेकर्ड
सेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले आइतबार २ हजार ४ सय अंक पार गरेको छ। परिसूचक बिहीबारको तुलनामा ५०.२० अंक बढेर २ हजार ४२४ अंकमा कायम भएको हो। आजको परिसूचक हालसम्मकै उच्च हो। परिसूचकमा मात्रै नभई यस दिन कारोबार रकममा पनि उच्च...
एप्पलले म्याकबुक ल्यापटपको नयाँ सिरिज निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। इन्ग्याजेटका अनुसार एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयरको डिजाइन बनाउन सुरु गरिसकेको छ। प्रयोगकर्ताबीच यसको नयाँ फिचरबारे चर्चा बढिरहेको छ। म्याकबुक एयर एप्पलको पुराना उत्पादन भन्दा पातालो र हलुका हुने बताइएको छ। कम्पनीले...